ဆံပင်တိုတဲ့မ်ိန်းကလေးတွေသာ သိနိုင်မယ့် ပြဿနာ(၅)မျိုး – For her myanmar
Posted on May 3, 2019 Author Christina Rosy	Comment(0)
ဆံပင်ညှပ်ချင်တာ ယောင်းအပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ ဆံတိုယောင်းလေးတွေမှာ ဒီလို ပြဿနာတွေရှိတတ်တာ မသိသေးရင်တော့ ယောင်းအပြစ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
အခုလိုအိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာ ခေါင်းတုံးတုံးပစ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတာ အက်ဒမင်တစ်ယောက်တည်းလား 😀 ဘယ်လောက်ပဲအရှည်ထားထား တစ်ချိန်ချိန်တော့ညှပ်ချင်စိတ် တထောင်းထောင်းပေါက်လာတာ မိန်းကလေးဆိုတဲ့အမျိုးပါ။ အဲ.. ညှပ်ပြီးရင်လည်း ဆံပင်ရှည်လေးတွေကို တသသဖြစ်တတ်ကြတာကလည်း ကိုယ်တွေပါပဲ။ ကဲ.. ဒီတော့ ဆံပင်အတို ညှပ်ပြီးရင် ဘယ်လို ပြဿနာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်လဲ တူတူကြည့်ရအောင်..
၁။ ရှည်ချင်တိုင်း မရှည်
တစ်နာရီကို အခါ(၆၀)လောက် စိတ်ပြောင်းတတ်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ ဆံပင်တိုချင်တုန်းကတိုပြီး တိုသွားပြန်တော့လည်း ပြန်ရှည်လာဖို့ ရက်ထိုင်တွက်ပါပြီ။ ဆံပင်ဆိုတာ တိုချင်တဲ့အချိန် ထတိုလို့ရပေမဲ့ ရှည်ချင်စေတိုင်း ရှည်မလာတတ်တဲ့အမျိုးရှင့်။
Related Article >>> ဘယ်လို အချိန်မျိုးတွေမှာ ဆံပင်တို ညှပ်သင့်လဲ?
ဆံပင်ညှပ်တုန်းကတော့ အကောင်း၊ တစ်ယောက်ယောက်များ ကျစ်ဆံမြီးလေးနဲ့ လှနေတာမတွေ့လိုက်နဲ့။ မြက်ပေါက်လောက်ရှိတဲ့ ဆံပင်ကို ရှည်စေချင်လာတာက နှစ်ယောက်မရှိ။ ဒီ့အပြင် သူများတွေ ကောက်လိုက်၊ ဖြောင့်လိုက်၊ ပုံသွင်းလိုက်နဲ့ ဆံပင်စတိုင်မျိုးစုံပြောင်းပစ်နေတဲ့အချိန်ကိုယ့်မှာ ဒီကေနဲ့ငုတ်တုတ်နေရုံမှတစ်ပါး…
အထူးသဖြင့် ရှိတ်ဖော်တဲ့ပုံစံမျိုး ကေဟော့ဟော့လေး ညှပ်ထားရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ဆံပင်နဲ့ကိုယ် ညှပ်ထားလည်း ဝေဖန်ခံရမှာပါ။ ကြိုက်တဲ့သူကတော့ “လုံးဝအလန်း” လို့ပြောမှာဖြစ်ပေမဲ့ မကြိုက်တဲ့ အမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းကြားက လူကြီးတွေကတော့ လူမိုက်တစ်ယောက်လို ဝေဖန်ဆုံးမတော့မှာမို့လို့ နားပူခံရတော့မှာပါ ယောင်းတို့ရေ..
၄။ ကလေးလို့ အထင်ခံရလွန်းခြင်း။
လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ အရပ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ယောင်းတွေကတော့ ဆံတိုနဲ့ဆို ရှိရင်းထက်ပိုနုသွားတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတာပေါ့ ဆိုပြန်တော့လည်း သူစိမ်းတွေကိုယ့်ကို ကလေးတစ်ယောက်လို ခေါ်ဝေါ်ဆက်ဆံတော့ နည်းနည်းတော့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသား။
Related Article >>> ဆံပင်ရှည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေသာ သိနိုင်မယ့် အခက်အခဲ(၈)မျိုး
၅။ အအေးဒဏ်ကို မတုနိုင်ခြင်း။
ဆောင်းတွင်းလိုရာသီဥတုအေးတဲ့အခါ ဆံရှည်ယောင်းတွေ ဆံပင်ချပြီး လည်ဂုတ်ကို အနွေးပေးနေနိုင်ချိန် မာဖလာနဲ့နှစ်ပါးသွားနေရတာက ဆံတိုယောင်းတွေပါ။
အက်ဒမင်ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ပြသာနာတွေပြောပြီးပြီဆိုတော့ ယောင်းတို့လည်း ဆံတိုဂုတ်ဝဲလေး ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ တခြားအခက်အခဲလေးတွေကို မန့်ထဲမှာမျှဝေခဲ့ပေးဦးနော်။
ဆံပငျညှပျခငျြတာ ယောငျးအပွဈမဟုတျပမေဲ့ ဆံတိုယောငျးလေးတှမှော ဒီလို ပွဿနာတှရှေိတတျတာ မသိသေးရငျတော့ ယောငျးအပွဈဖွဈသှားပါပွီ။
အခုလိုအိုကျတဲ့ရာသီဥတုမှာ ခေါငျးတုံးတုံးပဈခငျြစိတျပေါကျနတော အကျဒမငျတဈယောကျတညျးလား 😀 ဘယျလောကျပဲအရှညျထားထား တဈခြိနျခြိနျတော့ညှပျခငျြစိတျ တထောငျးထောငျးပေါကျလာတာ မိနျးကလေးဆိုတဲ့အမြိုးပါ။ အဲ.. ညှပျပွီးရငျလညျး ဆံပငျရှညျလေးတှကေို တသသဖွဈတတျကွတာကလညျး ကိုယျတှပေါပဲ။ ကဲ.. ဒီတော့ ဆံပငျအတို ညှပျပွီးရငျ ဘယျလို ပွဿနာမြိုးတှေ ကွုံရတတျလဲ တူတူကွညျ့ရအောငျ..
၁။ ရှညျခငျြတိုငျး မရှညျ
တဈနာရီကို အခါ(၆၀)လောကျ စိတျပွောငျးတတျတဲ့ ယောငျးယောငျးတို့ ဆံပငျတိုခငျြတုနျးကတိုပွီး တိုသှားပွနျတော့လညျး ပွနျရှညျလာဖို့ ရကျထိုငျတှကျပါပွီ။ ဆံပငျဆိုတာ တိုခငျြတဲ့အခြိနျ ထတိုလို့ရပမေဲ့ ရှညျခငျြစတေိုငျး ရှညျမလာတတျတဲ့အမြိုးရှငျ့။
Related Article >>> ဘယျလို အခြိနျမြိုးတှမှော ဆံပငျတို ညှပျသငျ့လဲ?
ဆံပငျညှပျတုနျးကတော့ အကောငျး၊ တဈယောကျယောကျမြား ကဈြဆံမွီးလေးနဲ့ လှနတောမတှလေို့ကျနဲ့။ မွကျပေါကျလောကျရှိတဲ့ ဆံပငျကို ရှညျစခေငျြလာတာက နှဈယောကျမရှိ။ ဒီ့အပွငျ သူမြားတှေ ကောကျလိုကျ၊ ဖွောငျ့လိုကျ၊ ပုံသှငျးလိုကျနဲ့ ဆံပငျစတိုငျမြိုးစုံပွောငျးပဈနတေဲ့အခြိနျကိုယျ့မှာ ဒီကနေဲ့ငုတျတုတျနရေုံမှတဈပါး…
အထူးသဖွငျ့ ရှိတျဖျောတဲ့ပုံစံမြိုး ကဟေော့ဟော့လေး ညှပျထားရငျ ကိုယျ့ပိုကျဆံနဲ့ကိုယျ၊ ကိုယျ့ဆံပငျနဲ့ကိုယျ ညှပျထားလညျး ဝဖေနျခံရမှာပါ။ ကွိုကျတဲ့သူကတော့ “လုံးဝအလနျး” လို့ပွောမှာဖွဈပမေဲ့ မကွိုကျတဲ့ အမြိုးအသိုငျးအဝိုငျးကွားက လူကွီးတှကေတော့ လူမိုကျတဈယောကျလို ဝဖေနျဆုံးမတော့မှာမို့လို့ နားပူခံရတော့မှာပါ ယောငျးတို့ရေ..
၄။ ကလေးလို့ အထငျခံရလှနျးခွငျး။
လူခဈြလူခငျပေါမြားတဲ့ အရပျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ယောငျးတှကေတော့ ဆံတိုနဲ့ဆို ရှိရငျးထကျပိုနုသှားတတျပါတယျ။ ကောငျးတာပေါ့ ဆိုပွနျတော့လညျး သူစိမျးတှကေိုယျ့ကို ကလေးတဈယောကျလို ချေါဝျေါဆကျဆံတော့ နညျးနညျးတော့စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈရသား။
Related Article >>> ဆံပငျရှညျတဲ့ မိနျးကလေးတှသော သိနိုငျမယျ့ အခကျအခဲ(၈)မြိုး
၅။ အအေးဒဏျကို မတုနိုငျခွငျး။
ဆောငျးတှငျးလိုရာသီဥတုအေးတဲ့အခါ ဆံရှညျယောငျးတှေ ဆံပငျခပြွီး လညျဂုတျကို အနှေးပေးနနေိုငျခြိနျ မာဖလာနဲ့နှဈပါးသှားနရေတာက ဆံတိုယောငျးတှပေါ။
အကျဒမငျကွုံခဲ့ဖူးတဲ့ ပွသာနာတှပွေောပွီးပွီဆိုတော့ ယောငျးတို့လညျး ဆံတိုဂုတျဝဲလေး ဖွဈခဲ့တုနျးက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ တခွားအခကျအခဲလေးတှကေို မနျ့ထဲမှာမြှဝခေဲ့ပေးဦးနျော။
Tagged cut, Fun, girls, hair, problems, short, Short Hair
FUN Knowledge Love
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို သေချာခံစားမိစေမယ့် စာအုပ်လေး ၂ အုပ်
Posted on February 16, 2018 Author Sugar Cane
ပူလောင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေသာ ရှိတာမဟုတ်ဘဲ အေးမြတဲ့ မေတ္တာတရားတွေကို ခံစားသိရှိနိုင်မယ့် စာအုပ်ကောင်းလေး နှစ်အုပ်အကြောင်းကို ယောင်းတို့ သိချင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်နော်…
Posted on July 25, 2017 July 25, 2017 Author Su Myat